Fambara : ireo korontana mahamenatra
"Fa any am-parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, … lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, … mpieboebo." 2 Timoty 3:1-4
"Ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy... Indro, avy faingana Aho ; ary eto amiko ny famaliako." Apokalypsy 22:11,12
Misy mpanao gazety fanta-daza iray, manamarika ny fihemoran’ny soatoavina rehetra ara-pitondrantena, toy ny asa, herim-po, fahitsiana, firaisan-kina. Ahiany ho rava ny fiarahamonina, satria manomboka mikororosy avokoa izay rehetra ilaina mba hahatonga azy ho azo iainana sy ho zaka. Mazava ho azy fa mampanahy azy koa ny firongatr’ireo “korontana mahamenatra”. Aminy dia fambara fahalovana manenika ny tontolon’ny fiarahamonina izany. Fanatanjahantena, pôlitika, toe-karena, haino aman-jery, … samy voakasiky ny kolikoly, ny “vola maloto”, ny fisandohana samihafa avokoa ny sehatra rehetra.
Mampametra-panontaniana ny loharanon’io fitotonganana io sy ny vokany. Mamaly ny Tenin’Andriamanitra hoe: “Avy amin’ny fo no ivoahan’ny sain-dratsy, dia ny vonoan’olona, ny fakam-badin’olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampanga lainga, ny fitenenan-dratsy” (Matio 15:19), ary “Izay manota dia avy amin’ny devoly” (1 Jaona 3:8). Tsindrian’ny Baiboly mihitsy aza fa hiharatsy hatrany ny toe-javatra, ka hanjary tsy zaka intsony. Dia horaisin’izao tontolo izao am-pifaliana ilay lehilahy mahery, milaza hitondra fandaminana, nefa dia hampihatra famoretana mbola tsy nisy toa izany. Fa alohan’izany kosa dia efa ho tonga ny Tompo, haka ny Fiangonany.
Ny fahaverezan’ireo torolalana ara-pitondrantena ve, tsy efa fambara momba ilay vanimpotoana mampivarahontsana, feno korontana sy fitsarana, hanomboka hihatra amin’ny olombelona? Tokony hanaiky koa isika fa efa misy tsimok’izany faharatsiana rehetra izany ao am-pontsika. Aoka hamboraka izany amin’Andriamanitsika. Ary ny tsirairay no tokony handray ho an’ny tenany ny fahasoavana atolotr’Andriamanitra, Izay te hanafaka antsika sy te hanome fiainam-baovao ho antsika, noho ny sorona nataon’i Kristy, maty sy nitsangana tamin’ny maty.